TOMATO "ROSALISA F1": SHARAXAADDA KALA DUWAN, SIFOOYINKA DARYEELKA, SAWIRKA YAANYADA - BEER CAGAARAN
Tamaandhada la yaab leh ee Rosaliz F1: sharaxaadda kala duwan, talooyinka beerashada
Noocyada kala duwan ee yaanyada "Rosaliz F1". Tani waa shaqooyin cusub oo ay sameeyaan shirkadaha reer Holland oo ka socda shirkadda "Seminis". Waxaa ku jira Diiwaanka Gobolka ee Ruushka.
Beelaha waxaa lagula talinayaa in beerista dhulka lagu furo beeraha gaarka loo leeyahay. Sababtoo ah isdhexgalka ee baadiyaha iyo midabada midhaha ayaa noqon doona mid xiiso leh beeraleyda.
Akhri wax dheeraad ah maqaalkayaga. Halkaas waxaad ka heli doontaa sharaxaad buuxda ee noocyada kala duwan, inaad barato astaamaha iyo sifooyinka beerashada.
Rosaliz F1 Tomato: sharaxaad kala duwan
Kala duwan dhexdhexaad dhexdhexaad ah. 113-118 maalmood waxay ka baxaan abuurka miraha beeraha. Bush nooca qiyaasaha, waxay gaartaa dhererka 65-75 sentimitir. Isku day tiro badan oo caleemo cagaaran, cabbir dhexdhexaad ah oo tamaandho ah. Waxay muujinaysaa iska caabin aad u sareeya ee cudurada yaanyada, sida verticillary lakab, fusarium, fayraska viral. Cadaadiska aadka u sarreeya ee dhaawacyada nematode.
ay duurka u habeeyaan;
xataa xajmiga miraha;
waxqabadka wanaagsan inta lagu jiro kaydinta mudada dheer.
Sida laga soo xigtay faallooyin badan oo laga helay bacrimin soo koray Rosaliz F1 hybrid, ma jirin wax cillado ah oo la ogaaday.
miro miro: yaanyo wareegsan, waxoogaa xejis ah, heer dhexdhexaad ah oo dheelo;
Isugeynta celceliska: qiyaastii 17,5 kiilo garaam markii uu soo degayo mitir laba jibbaaran oo aan ka badnayn 6 duurka;
midab casaan leh oo si wanaagsan loo qeexay;
miisaanka celceliska 180-220 grams;
isticmaalka dhadhanka guud, dhadhanka weyn ee saladhka, ma jajabiyo kaydinta dheeraadka ah;
bandhig fiican, nabadgelyo sare inta lagu jiro gaadiidka.
Muuqaalka tamaandhada "Rosalise F1" waxaa lagu arki karaa faahfaahin dheeraad ah sawirka:
Abuur geedo si ay u beertaan 55-65 maalmood ka hor taariikhda la qorsheeyey ee ka soo degaysa godka. Ciidda ayaa si fiican loo diyaariyey xilliga dayrta, soo saarista dhayil adoo ku daraya xididdada qallalan iyo afkoda lupin. Natiijo wanaagsan waxay ku siin doontaa hordhaca humus. Kuwa ugu horreeya ee ugu wanaagsan ee yaanyada on digaagga, dushiisa, karootada.
Miro geed lagu shubo heerkulka qolka. Iyada oo muuqaalka ka mid ah caleen ugu horeysay, run ah leh bacarimiso leh Bacriminta macdanta waa lagama maarmaan. Marka ay soo degaan on cabsida bacarimiso bacriminta adag. Inta lagu jiro mudada koritaanka iyo samaynta miro si ay u qabato laba quudin dheeraad ah. Biyo diirran oo ku jira xididada dhirta, ka ilaalinta nabaad-guurka iyo biyaha caleemaha geedka.
Beelaha "Rosaliz F1" waxay kugu farxi doonaan oo keliya markaad goosanayso tamaandhada tayada sare leh. Waxay ku xusuusin doontaa maalmaha kuleylaha xagaaga xiliga qaboobaha markaad fureyso weel dabacsan oo yaanyo tufaax ah oo ka mid ah xajmiga iyo xajmiga aadka u fiican.